ဗဟုသုတ Archives - Uptodate MM
အသှငျပွောငျး ပါကငျ တှေ မွနျမာနိုငျငံ သှငျးနပွေီထငျတယျ ဘယျသူ့စီးပှားရေးကိုမှထိခိုကျရနျ မရညျရှယျပါ ထိုငျးနိုငျငံမှနာနတျသီးမြားသညျ ကြောကျကပျကိုပကျြစီးစနေိုငျသော ဓာတုပစ်စညျးမြားဖွငျ့တှရေ့သညျ Dragon King နာနတျသီးမြားသညျ ကြောကျကပျကိုပကျြစီးစသေညျ့ တရားမ၀ငျခြိုသညျ့ cyclamic acid နှငျ့အဆိပျသငျ့ကွောငျးတှရှေိ့ခဲ့သညျ Keoni Everington၊ ထိုငျဝမျသတငျး၊ ၀နျထမျးစာရေးဆရာTAIPEI (ထိုငျဝမျသတငျး) ။ ထိုငျးနိုငျငံမှ သဘာဝမှေးသောအရသာနှငျ့ထူးဆနျးသညျ့ အရသာရှိသညျ့ထိုငျးမှ တငျသှငျးသောနာနတျသီးထုတျကုနျနှငျ့
ရောဂါပိုးအ များ ဆုံးခိုေ အာ င်းနို င်သော လူ အ များနှ င့် ထိေ တွ့မှု များ တဲ့ ပစ္စည်းများ
Covid-19 ရောဂါက ကူးစက်မှုမြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအသွင်အဖြစ် ရှိနေ စဉ်မှာ ဒီရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိလက်ကို မကြာခဏဆေးကြော တာ၊ လူအများအသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သတိနဲ့ကိုင်တွယ်တာ၊ သူတို့ကို ကိုင်တွယ် အပြီး လက်ဆေးတာ၊ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကို မသွားတာ၊ လက်မဆေးဘဲ မျက်နှာ နှာခေါင်း ပါးစပ် မျက်လုံးကို မကိုင်တွယ်တာလိုမျိုးတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင်
ဆေး စာ နဲ့ ပတ်သက် လာ ရင်…ဆရာစားေ စချ င် လို့ ပါ…ဆိုပြီး…ကြက် ဥပြုတ် တစ် လုံး လာေ ကျွး ခဲ့ ရင်ေ တာင် မ စား မိစေနဲ့…”
“ဆေး စာနဲ့ ပတ်သက်လာရင်… ဆရာစားစေချင်လို့ပါ…ဆိုပြီး… ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံး လာကျွေးရင်တောင် မစားမိစေနဲ့…” ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ် ၉ နှစ်လောက်က… ဆရာ သိန်းမြို့ ဆုံးမဖူးတဲ့ စကား… ဘာလို့ဆို… ဆေးစာထွက်ဆိုချက် သမာသ မတ်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ… ဆရာဝန်တိုင်းမှာ မဖြစ်မနေ ရှိကိုရှိရမယ့်… စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမယ့် ပဋိဥာဉ်
အရေးပေါ် မီးသ တ် ကား လာ ချိန် တွင် လမ်းဖ ယ်မေ ပး သူ ကို တို က်မိ သွား ရင် မီး သတ် ယာဉ်ေ မာင်း မှာ အပြစ်မရှိပါ
Uptodate MM | March 18, 2020
မီးေ လာင်နေစဉ် မီးသတ်ဥသြဆွဲကာ မီးလောင်ရာနေရာသို့သွားလာနေသော မီးသတ်မော်တော်ယာဉ်မော င်းနှ င်ရာ လမ်းကြောင်းတလျှောက် စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် မော်တော်ယာဉ်များ သူ့ထက်ငါအလုယက်မောင်းနှင်ခြင်း လမ်းဖယ်မပေးခြင်း နှင့် မီးသတ်ယာဉ်မောင်းများအား အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေရန် ပြုမူခြင်းများမှ ရှောင်ကြဉ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အသ်ိပေးပန်ကြားအပ် ပါသည်။ အထက်ပါအချက်များအားလိုက်နာပါက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အား တက်စွမ်းသလောက်ကူညီရာရောက်ပါသည်။ အကယ်၍ အထက်ပါတိုင်း မလိုက်နာဘဲမတော်တဆ(ထိခိုက်မှုဖြစ်ပါက) မီသတ်ကားမောင်းသူအား
ချမ်း သာ ဖို့ အတွက် ငွေသုံးပါ”….နည်းနည်း ထူး ဆန်း သွား သ လား သူ ငယ်ချင်း??! ငါ တို့က ချမ်း သာ ဖို့ ပိုက် ဆံ စု ပါပဲ သိ ခဲ့ တာလေ……
နည်း နည်းထူးဆန်းသွားလား သူငယ်ချင်း??! ငါတို့က ချမ်းသာဖို့ ပိုက်ဆံစု ပါပဲ သိ ခဲ့တာလေ…… သူဌေးဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်း……သူတို့ဘဝတွေဟာ ချမ်းသာပြီးရင်းချမ်းသာနေကြတယ်…… ငါတို့ သာမာန်အလုပ်သမားဘဝတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါသူငယ်ချင်း….ငါတို့တွေဟာ ဆင်းရဲပြီးရင်းဆင်းရဲနေကြတယ်….. ဘာဖြစ်လို့လဲ……. ငါတို့လို သာမာန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ ငါတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်ဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ သူဌေးတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ဟာ သူတို့ရဲ့
ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ် ကို တိုက် ထုတ် နိုင် တဲ့ တိုင်း ရင်းေ ဆး ပင်
ဒီနေ့ မတ် လ ၁၆ရက် (၂၀၂၀)မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကူးဆက်ရောဂါပိုး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေကို သေစနိုင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဖါထလိုင်ကျွန်ေ ဆးဖက်ဝင် ฟ้าทะลายโจร အပင်ဟာ ထိုင်းပြည်သူအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ်။ ဆေးခါးကြီး ပင် အခေါ်Green chiretta (穿心莲) ဆေးခါးကြီးကိုငရုတ်ခါး၊ကရင်ဆေးခါးဟုအရပ်ဒေသကိုလိုက်ပြီး ခေါ်
ကို ရို နာဗိုင်း ရပ်စ် ကို တစ်စိ တ် တစ်ေ ဒသ ကာ ကွ ယ်နိုင် တဲ့ ကိုယ် ခံ အား” (အောက်စ ဖို့ဒ် ဆရာတော်)
အ ခု သင်္ကြန်လည်းနီးပြီဆိုတော့ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေလည်း ပြောကြတယ်၊ အခုပြောနေတာက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း ပြောနေတာ။ မုဒိတာဖြစ်စရာကတော့ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်း က သူ့ပြည်သူတွေကို သူက စောင့်ရှောက်ချင်ကြတယ်။ အစိုးရတွေရော ပြည်သူအချင်းချင်းရော စောင့်ရှောက်ချင်ကြတယ်။ ဒါတွေက ကော င်းတဲ့ဟာတွေ။ အဲတော့ ဒီပြဿနာက လူသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကောင်းတာတွေကိုဆွဲထုတ်ပေးနိုင်ရင် ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်။ နောက်တစ်ဖက်ကနေ
ကိုယ့် အိမ် မှာ အ သက်( ၆၀) နဲ့ အ ထက် လူကြီးေ တွ ရှိ ရင် ဒါေ လး သိ ထား ပါ .
ကိုယ့်အိမ်မှာ အသက် ၆၀ နဲ့အထက် လူကြီးတွေရှိရင် ဒါလေး သိထားပါ ကိုယ့်အိမ်မှာ အသက် ၆၀ နဲ့အထက် ရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့ကို အပြင်သိ တ် မထွက်ခိုင်းပါနဲ့ ။ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုကို တတ်နိုင်သမျရှောင်ကြဉ်ပါ။ UK မှာဆိုရင် ၆၀ နဲ့အထက်တွေ မသေချင်ရင် အခုအချိန်ကစပြီး
က ပ်ကြီး သုံးကို ပါး ကျော် လွှား နိုင်ေ စ ဖို့ မင်း ကွန်း ဆရာေ တ်ာကြီး ၏ မိန့် မှာချ က် များ
Uptodate MM | March 17, 2020
(၁)။ သူတကာတွေ လောဘကြီးသော် လည်းမိမိက လောဘမကြီးအောင်နေပါ။ထိုသို့နေလျှင် သူတကာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း(ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရာယ်)ဘေးသင့်ရောက်သော်လည်း မိမိမှာထိုဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။(၂)။ သူတကာတွေ ဒေါသကြီးသော်လည်းမိမိကေဒေါသမကြီးအောင်နေပါထိုသို့နေလျှင် သူတကာ လက်နက်ဘေးဆိုး အန္တရာယ်(သတ္တန္တရကပ်)ဆိုက်ရောက်သော်လည်းမိမိမှာ ထိုဘေးမှ လွတ်ြေ မာက်မည်။(၃)။ သူတကာတွေ မောဟကြီးသော်လည်းမိမိက မောဟမကြီးအောင်ေ နပါ။ ထိုသို့နေလျှင် သူတကာ အနာရောဂါဘေးဆိုး (ရောဂန္တရကပ်)ဆိုက်ရောက်သော် လည်းမိမိမှာ ထိုကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။ ဤကား
ဒီဂါ ထာ ရွတ် ရင် အိမ်စော င့်နတ် ကိုယ်စော င့်နတ်တွေတောင် မနေ နိုင်တော့ ဘဲ ဖြည့်ဆည်းေ ပးရ ပါတယ် တဲ့
အိမ်စောင့်နတ် ကိုယ်စောင့်နတ်တောင် ဒီဂါထာရွတ်ရင် မနေနိုင်တော့ပဲ ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ ဂါထာတော်ကြီးကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက် ရပါတယ်… “သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာလေးအကြောင်း မသိသူတွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောချင်ပါတယ် ….သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်က၂၇ခေါက်ကျော်ရင် အိမ်စောင့်နတ်၊ကိုယ်စောင့်နတ်တောင်နေမရတော့ ပါဘူး…. ပြိတ္တာကတော ဂါထာအစကြားတာနဲ့ တစ်ချိုးတည်းလစ်ပြေးပါတယ်…ကျောင်းထိုင်ပြတ္တာကြီးတွေ အခြားဂါထာတွေပရိတ်တွေလိုက်ဆိုပြနိုင်ေ ပမယ့် သမ္ဗုဒ္ဓေစရွတ်တာနဲ့လစ်ပြေးတာပါပဲပြေးတဲ့နောက်ကလိုက်ရွတ်၊သူကိုယ်ရောင်မဖြောက်ပြေးနိုင်ပါဘူးသမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာေ တ်ာတစ်နေ့တစ်ထောင်မကရွတ်ရင် နတ်တွေတိမ်ကြားမင်းတွေထက်တောင်ဘုန်းကြီးလာနိုင်ပီး စိတ်က တောင့်တရင်သူတို့တွေကောင်းကောင်းနေမရပါဘူး…လိုက်ဖြေစည်းပေးရပါတယ်. သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော် ဟာနေမင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်…သဲစုမကဘုရားတွေရှိခိုးရတာကြောင့် အရမ်းအစွမ်းထက်ကြောင်းအနည်းငယ်